डराएरै भए पनि मानिसहरु किन ‘हरर’ फिल्म हेर्छन् ? | Jukson
मणिपाल अस्पतालमा मैले जे देखे-…
विवेकशील साझामा गण्डकी प्रदेशबाट केन्द्रिय…
ग्लोबल रिचको अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटी फेयर…
टुटल र पठाओ एपमार्फत् यात्रु…
धरमलाई ल्होछार कप टेनिस उपाधी
रविन्द्र मिश्र र रञ्जु दर्शनाका…
गण्डकीका योजना अब उपभोक्ता समिति मार्फत, मन्त्री भन्छन्, ‘घोटला हुन दिँदैनौँ’
डराएरै भए पनि मानिसहरु किन ‘हरर’ फिल्म हेर्छन् ?
डरको एक आफ्नै मनोविज्ञान छ । यस मनोविज्ञानले विभिन्न प्रवृत्तिको माध्यमबाट हाम्रो मनमा रोमाञ्चित पैदा गर्दछ । धेरैजसो उक्त रोमाञ्चक प्रतिक्रियाको हामी ‘हरर’ फिल्म हेरेर मजा लिन्छौ, जसमा अलौकिक शक्ति, भयानक राक्षस, भूत–प्रेत आदि हुन्छन् ।
हाम्रो मनको सहज प्रवृत्ति भनेको हिंसा र भय हो । जब यस प्रकारका दृश्य हामी पर्दामा देख्छौ, हामी आफैँमा रोमाञ्चित महशुस गर्दछौं । डरलाग्दा दृश्य पर्दामा हेरिरेका बेला हात र मांशपेशीहरुमा रक्तचाप बढेर जान्छ र बिस्तारै शरीरको तापक्रम बढेर पसिना निक्लिन्छ । शरीरमा यस्तो प्रकारको तरङ्ग पैदा भएमा हामी पूर्णरुपले फिल्मको मजा लिन्छौ ।
यूनानी दार्शनिक ‘अरस्तु’लाई मान्ने हो भने संकेत प्रक्रियाद्वारा डरलाग्दो काहानी वा हिंस्रक नाटकहरुको माध्यमबाट नकारात्मक भावनाहरुलाई छुटाउन वा समाप्त पार्न सकिन्छ । मानिस यस्ता नाटक वा कहानी सुन्न तथा हेर्न आकर्षित पनि छन् ।
मानिसमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो र मानिस जहिले पनि नयाँ संसारलाई जान्न वा बुझ्न चाहान्छ । यस जिज्ञासाका कारण पनि मानिस डरलाग्दा दृश्य अर्थात् फिल्म हेर्न रुचाउँछन् ।
दिन दयाहाङ र प्रियंकाकै हुन् त ?
एउटा त्यस्तो गाउँ जहाँ १२ वर्ष पुगेपछि केटी बन्छन् केटा
Malina Joshi Miss Nepal 2011
Mega Model season3Season Finale
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रार्थना सभामा हिन्दु पुजारी
काजकिरिया भइसकेका ‘जीवन’ जीवितै भेटिए
३८ वर्षकी महिलाका ११ बच्चा, १५ वर्ष कान्छो युवकसँग बिहे
कम्युनिष्ट पार्टीहरुको काठमाडौंमा अन्तरार्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
दुर्घटनामा दुई प्रहरीसहित तीनको मृत्यु,एक घाईते